दाई बैदेशिक रोजगारीमा, भाइले आफ्नै भाउजुलाई यस्तो के गरे? – Hamro Nepali Samachar
Home/ समाचार/दाई बैदेशिक रोजगारीमा, भाइले आफ्नै भाउजुलाई यस्तो के गरे?
राजकुमारी यादवका पति बिदेशमा छन् । उनका पति बैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेश गएका हुन् । तर राजकुमारीलाई उनकै देवर नाता पर्नेले आँखा लगाएका छन् । उनका देवरले पहिले सहवासको प्रस्ताव गरे । नमानेपछि उनले वल प्रयोग गर्न खोजे ।यो घटना सप्तरीको हो ।
त्यहाँकोहनुमाननगरकंकालनीनगरपालिका १४ रम्पुराकी २८ वर्षिया राजकुमारी यादवमाथि यस्ते घटना भएको हो । उनले पत्रकारहरुबिच उनका देवर नाता पर्नेमाथि यस्तो आरोप लगाएकी हुन् ।राजविराजमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर नाताले देबर पर्ने सोही वडा निवासी ३५ बर्षीय सुर्य नारायण यादवले रातीको समयमा आफुमाथि अनैतिक कामको प्रयासगरेकोउनलेआरोपलगाएकीछन्
श्रीमान छाडेर ५ बर्ष कान्छाे कलिलाे श्रीमान रोज्दा भयो बुढेसकालमा बि’च’ल्ली ( भिडियो सहित)